War u Wanaagsan Taagerayaasha Arsenal kaddib Laurent Koscielny oo markii u horreeyay cayaaray tan iyo Bishii May – Gool FM
( London ) 27 Nof 2018. Laurent Koscielny ayaa dib u xirtay kabihiisa isagoo ku dhaw inuu kusoo laabto kooxda kowaad ee Arsenal kaddib lix bilood uu ku maqnaa dhaawac.
Kabkanta Koscielny ayaa cayaaray markii u horreysay tan iyo dhaawicii kasoo gaaray kulankii Atletico Madrid bishii May markii uu kasoo muuqday kooxda da’yarta 23-jira kulankii ay wajaheen Derby County habeenimadii isniinta.
Koscielny oo 33-jira, ayaa cayaaray 45-daqiiqo kulanka horyaalka labaad ee Premier League 2, iyadoo kooxda uu maamulo Freddie Ljungberg lagu xaaqay 5-0.
Ninka heerka caalami ee dalka France, kasoo seegay guushii xulkiisa uu ku hantay koobkii adduunka xagaagan, ayaa dheelay qeybta hore cayaartii ka dhacday Loughborough University Stadium, taasoo goolka uu u difaacayay dhan kasta laga jajabshay.
Koscielny, waxaa lagu badalay Jordi Osei-Tutu, kaa oo 10-daqiiqo cayaaray qeybta dambe ka hor inta aan laga saarin dheesha.
Koscielny ayaa tartan adag la gali doona labada cayaariyahan ee Rob Holding iyo Shkodran Mustafi oo kawsoo si joogta u ciyaara daafaca dhexe ee Gunnres.
Kooxda waqooyiga London ayaa guuldarro la’aan 17-kulan dhammaan tartamada xilli sido kale kulankii dhawaa ay guusha ka gaareen Bournemouth uu safta kusoo laabtay daafaca Greek-ga ee Sokratis.